I-Raw Noopept Powder (157115-85-0) Abavelisi-i-Phcoker Chemical
Disemba 27, 2018
I-Noopept powder imolekyuli yeNootropic efana nePiracetam. I-Noopept powder inefuthe elifanayo kwipiracetam powder, kuba ibonelela ngobulali …… ..
Amandla: 1245kg / inyanga
I-Raw Noopept powder (157115-85-0) ividiyo
I-Raw Noopept powder (157115-85-0) Inkcazo
I-Raw ye-Noopept engummangaliso yintuthuko engqondweni enokwenza ngcono kakhulu kunePiracetam ekujonganeni novelwano lwengqondo emva kokulimala kweengqondo okanye ukulimala kwengqondo.
I-powder coopnitive Raw Noopept powder (N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester) ijikeleze ii1000 ngamaxesha anamandla kune-piracetam. I-Piracetam ithuthukisa isigaba sokuqala senkqubo yememori, ngelixa i-Raw Noopept powder iphinde iphucule ukuhlanganiswa kunye nokufumana izigaba zememori. Ukuxhatshazwa, ukuxhatshazwa kwe-antioxidant, okuchasayo, kunye nokuvimbela i-neurotoxicity kwi-amyloid ngokweqile ngelixa kuphuculwe ukuhamba kwegazi. Kunceda ngokulala ubusuku obuhle, ukugwenxa, ukulala, ukuphathwa kwentloko, kunye nokufumana amandla amele ukuthatha umhla. Kwakhona kunceda ngokuxhalabisa, ukukhumbula kunye nokuxinezeleka.
I-Noopept eluhlaza (157115-85-0) S.uqobo
Igama lemveliso I-Raw Noopept powder
Igama leKhemikhali I-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, i-GVS-111
uhlobo Numama I-Raw Noopept powder
Iqela leziyobisi Nootropic
Inani leCAS 157115-85-0
I molecular Fi-ormula C17H22N2O4
I molecular WSibhozo 318.373 g / mol
IMasaisotopic Mass 318.37
Ukuxuba Point 97 ° C-98 ° C
Fukuhlaziywa kwakhona Point Akukho datha ifumanekayo
I-Biological Half-Life Imizuzu ye-30-60
Sukufaneleka I-Raw Noopept powder ngokuyintloko inyibilika emanzini, kodwa ayizukunyibilika ngokulula emanzini okanye kwijusi.
Sisibetho Tukushisa Gcina kwindawo eyomileyo kumashishini angaphaya kwe-25 ° C. Gcina kude nokufikelela kwabantwana.
Aukuguquka Ukunyanga imemori engakwaziyo, ingqwalasela kunye neminye imisebenzi yokuqonda kunye neengxaki zentliziyo.
I-Noopept (GVS-111) ligama lophawu lwe-N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, eyenziweyo yemolekyuli ye-nootropic.
Ngokuvame ukudideka njengenxalenye yentsapho ye-racetam, i-noopept i-peptide ekhethekileyo ye-nootropic eyenziwe eRashiya ukuphatha ukuhla kweengxaki ezinxulumene nobudala. Namhlanje, isetyenziswe ngabadala asebekhulile nabancinci be-nootropic kwaye sele ibe yinye yezidakamizwa eziphambili kunye nezidumi eziqhelekileyo ezisetyenziswayo.
I-noopept powder enamandla kunokuba i-piracetam kunye nezinye izidakamizwa eziphuculisayo izidakamizwa, i-noopept isetyenziswe njengesiqhelo esinamandla sokunyanga kwesifo se-Alzheimer, ukuphazamiseka kwengqondo, kunye nokunye ukuhla kweengqondo ezinxulumene namazwe afana neRashiya kunye ne-former Soviet Union.
I-Noopept iye yanda ekuthandeni kwiminyaka emibini edluleyo kwaye ngoku kungokunye kwama-nootropics anconywayo kakhulu kuluntu.
Noopept powder (157115-85-0) Indlela yokuSebenza
I-Noopept ineendlela ezinzima zokwenza. Isiphumo se-nootropic seziyobisi sixolelaniswe yenye ye-metabolites esebenzayo (i-cycloprolylglycine) iyafana nakwisakhiwo se-dipeptide ye-cyclic cyclic enomsebenzi ochasene ne-amnesic. Kufunyenwe ukuba ichiza lonyusa ukubonakaliswa kwe-NGF kunye ne-BDNF kwi-hippocampus, ibonakalisa iipropathi ezintle ze-choline kumanqanaba okuziphatha kunye nee-neuronal, kunciphisa uxinzelelo lwe-oxidative kunye nokwenza ngcono umsebenzi weenkqubo ze-antioxidant, kunye nokucinezela i-kinases pSAPK / JNK kunye ne-PERK1. I-Noopept iphucula inkumbulo ngokwandisa imichiza yobuchopho ebizwa ngokuba yi-BDNF nangezinye iindlela.
benefits ye-Noopept powder (157115-85-0)
I-Noopept Iphucula ukusebenza kweCognitive kunye neMemori
I-Noopept isusa ibhoksi yobungqina
I-Noopept isiza ngeengcinezelo
Noopept Boosts Focus
I-Noopept Ingamnceda nge-Alzheimer's
I-Noopept powder ephakanyisiweyo (157115-85-0) Isistim
I-Noopept inomthamo ophantsi kakhulu kumlinganiselo we-piracetam (4800mg), isincomo sokulinganiswa kwe-noopept ngu-10-30mg.
Ngokomnye uphando, i-powder ye-noopept i-1000 amaxesha angaphezu kwe-piracetam, yingakho i-dosage ephakanyisiweyo iyancipha.
Imiphumela ye-Noopept powder (157115-85-0)
Iziphumo zeNoopept powder zithambile kwaye uninzi lwabasebenzisi alunazo naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga konke konke. Zimbalwa iziphumo ebezingalindelekanga ezikhoyo, kodwa ukuba uthatha le nootropic ngokweqile kunokubangela iintloko, ukudinwa, isicaphucaphu kunye nokungalali.
Isikhokelo se-Noopept: Yintoni enokwenziwa nguNoopept kuwe?